အဆိုပါစီမံကိန်းများ၏တဲ့အခါမှာမြေအောက်ရထားလိုင်းကျောက်ခေတ် Mahmutbey Current Status? - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[17 / 08 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် 8 ရာခိုင်နှုန်းဆီစီးပွားရေးထိန်းသိမ်းထား	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 08 / 2019] 2,5 သန်းနိုင်ငံသားများရထားပိုမိုနှစ်သက်ခရီးသွားနေ့ရှိကြ၏	06 တူရကီ
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အဆိုပါစီမံကိန်းများ၏တဲ့အခါမှာမြေအောက်ရထားလိုင်းကျောက်ခေတ် Mahmutbey Current Status?
kabatas mahmutbey မက်ထရိုလိုင်းစီမံကိန်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဘာလဲ
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ဥက္ကဌ Ekrem İmamoğlu, site ပေါ်တွင် Mahmut Kabat Besiktas ဘူတာရုံဖို့မြေအောက်ရထားလိုင်းကို၏ဆောက်လုပ်ရေးခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, ပှဲ၏ဒုတိယနေ့၏ကျောက်စာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး - ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတွေ့ရတဲ့ Mahmutbey မီထရိုဘူတာရုံ Besiktas စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ အစ္စတန်ဘူလ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာပြတိုက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Rahmi Asal, မြေအောက်ရထား၏တူးဖော်နေစဉ်အတွင်းတွေ့ရတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအပိုငျးအနှင့်အတူတက် လာ. နှင့်İmamoğluလက်ခံရရှိအောက်ရှိဒေသနှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပေး၏။ Asal, မြေအောက်ရထားတူးဖော်နေစဉ်အတွင်းအဆိုပါကြေးခေတ်အပိုငျးအထဲကနေချိန်းတွေ့အော်တိုမန်နှင့်ဘိုင်ဇင်တိုင်းကာလနှင့်အတူဆက်ရှိနေတဲ့သင်္ချိုင်းအဖြစ်İmamoğluနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်္ချိုင်းကနေဖယ်ရှား Asal, İmamoğluဖို့, တထောင်5500 အကြောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ထင်နှင့်ကိရိယာများအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်အချို့သောဥပမာပြခဲ့တယ်။ Asal, ပြတိုက်မှအရေးပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလမ်းများခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပျကွောငျးသမိုင်းဆိုင်ရာအပိုငျးအမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်, ထိုမက်ထရိုဘူတာအဝင်ဝ၏ကျန်ရှိသောအမှုတော်တို့ကိုအများပြည်သူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
İmamoğlu, "အဘယျသို့ဇာတ်စင်မှာ Metro တူးဖော်? သငျသညျဇန်နဝါရီလ 2020 ၏အဆုံး၏ရက်စွဲတူးဖော်ငါတို့အဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုဖြစ်ကြ၏ရှိရာ "ဟုအဆိုပါမေးခွန်းအား" Besiktas အတွက်မက်ထရိုစီမံကိန်းများတွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတည်းခိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်ဟာကြီးမားတဲ့သမိုင်းအတိတ်သောကွောငျ့, လေ့လာမှုတစ်ခုကဒီမှာအလင်းကိုသွန်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ယူတိုင်းခြေလှမ်းဂရုတစိုက်ဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ့်နိမိတ်လက္ခဏာ၌စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည်ဒါဘာလဲ။ ဤတွင်ကျွန်မတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲတော်မူသောငါတို့၏ပါမောက္ခများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကမှအောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။ ဟုတ်ပါတယ်, အစ္စတန်ဘူလ်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဤတန်ဖိုးများကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်, တဦးကိုလက်ပေါ်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီကရရှိခဲ့သတင်းအချက်အလက်များအဆိုအရကြောင့်ဘူတာရုံတစ်ဝိုက်တွင်တူးဖော်ရန်နှောင့်နှေးဆိုပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျောက်ခေတ် - Mahmutbey လိုင်းတစ်ခု inhibitory ပြည်နယ်ထုတ်ဖေါ်မထားဘူး။ သငျသညျယခုစေ့စပ်ဒီသာလျှင်ရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ဖွင့်ပွဲအနည်းငယ်နှောင့်နှေး။ လူတွေကလည်းကဒီမှာဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံဝင်သောအခါ, သူတို့ကမြေအောက်ရထားသို့ဆင်းသက်တော်မူသကဲ့သို့သင်တို့အပျက်အယွင်းတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ layout ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မျိုးလုံးသည်ဘူတာရုံအဖြစ်ကောင်းစွာပြတိုက်သို့လှည့်ခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
İmamoğluမကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကျနော်တို့လမ်း Balmumcu ၏ပြိုကျမျက်မြင်ကြပါပြီ "ဟုပြောသည်။ သူဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးခဲ့ကြတယ်ခဲ့မြေအောက်တူးဖော် "၏ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါသလား။ ဤမေးခွန်းကိုမှİmamoğluရဲ့တုံ့ပြန်မှု, "အဲဒီမေးခွန်းကိုပင်ထိုကဲ့သို့သောနှောင့်နှေးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ကိုရှာဖွေ, စသူတို့အားသောအရပ်တို့ကိုဦးစားပေးဖို့ကျရောက်နေတဲ့အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့အစီအမံယူလျှင်။ ငါစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအတွက်အလေးအနက်အစီရင်ခံစာ, ငါ့မိတ်ဆွေအများဆုံးချင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီမှာအလုပ်လုပ်သောသူသည်လူတို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်ဤကိစ္စအပေါ်တစ်ဦးကြာရှည်အပြင်ဘက်အတူတကွလာမှအများဆုံးပြင်းထန်သောလမ်းတစ်အမြန်အစီရင်ခံစာဖန်တီးရန်တူညီစားပွဲ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအများပြည်သူအကြောင်းကြားရန်အစီအမံများအတွက်လမ်းပြမြေပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်မည် "ဖြစ်ခဲ့သည်ယူပါလိမ့်မယ်။ İmamoğlu "အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး,3အတွက်အများဆုံးစိန်ခေါ်မှုလမ်းကြောင်း။ လေဆိပ်။ သငျသညျသူတစ်ဦးမက်ထရိုဧရိယာများအတွက်အလုပ်လုပ်ထင်ပါသလား? လူတိုင်းသည်ဤတစ်အတွေးမဟုတ်ပါဘူး "ဟုအဆိုပါပုံစံ၏မေးခွန်းကိုအပေါ်" ဒီလိုသတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုပြီးသား Mecidiyekoy -3။ လေဆိပ်လိုင်းနှင့်တစ်လိုင်းယခုအချိန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကတင်ဒါခဲ့သည်လမ်းလျှောက်။ မြို့ပြမြူနီစီပယ်၏ဤတင်ဒါကျင့်ဝတ်တဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားလိုင်းများ, မြေအောက်ရထား - Metrobus, ဘူတာရုံဖွဲ့စည်းပုံမှာအများအပြားရှုထောင့်များတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လည်းပါဝင်ပါသည်။ ဒီလက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်၌တည်၏။ လောလောဆယ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်ချီတက်သို့မဟုတ်ပင်ဤလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဲဒီမှာလတ်တလောခရီးစဉ်သတင်းအချက်အလက်ရ။ သူကကျနော်တို့ကိုလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များ၏အလင်း၌သငျသညျအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကို "အဖြေခဲ့လျှင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှစ်ဦးစလုံးလည်းကြားသိပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအမှု၌ Konya-Karaman မြန်နှုန်းရထားလိုင်းစီမံကိန်း 07 / 07 / 2013 ပြီးခဲ့သည့်ကိစ္စတွင် Konya-Karaman မြန်နှုန်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းမစ္စတာ Karaman လက်ထောက်MevlütAkgünဒီဘာသာရပ်အပေါ်ရေးသားထားသောသတင်းစာထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ; "မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏ Konya-Karaman ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်နှင့်တင်သောအကြားကို Double-လမ်းကြောင်းရထားလမ်းလေလံပွဲ၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ လူသိများသည်ကကို double-လမ်းကြောင်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးဒေါင်းလုပ်အမြန်ရထားစီမံကိန်းလုပ်ဖို့အချိန် 200 အပေါ်တင်ဒါခဲ့သည့် 40 မိနစ်ကနေ 11.03.2013 ကီလိုမီတာကနေအလျင်အမြန် Konya-Karaman နှင့် Konya-Karaman ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတင်ဒါများအတွက်အကဲဖြတ်ကာလဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နာရီကို 438.143.568,002မိနစ်ဖြစ်ပျက်ကဒီအဓိကစီမံကိနျး၏ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်ကိုတူရကီနှင့် Karaman အကြားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 ဖြစ်လိမ့်မည်။ Dual-line ကို Konya-Karaman မှ ...
Besiktas အစ္စတန်ဘူလ် BB - ကျောက်ခေတ် Tekstilkent - Mahmutbey ရထားလိုင်းစီမံကိန်းခြေလှမ်း2မီထရိုလိုင်းအတွက်တင်ဒါပါလိမ့်မည် 28 / 11 / 2012 ရှယ်ယာနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်ဘယ်ဟာ "Besiktas - ကျောက်ခေတ် - Tekstilkent - Mahmutbey ရထားလိုင်းစီမံကိန်း" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နောက်ဆုံးအဆင့်က2နူးညံ့ဖို့စင်ပေါ်မှာကနေကြိုတင်အလုပ်သတ်မှတ်ချက်မြေအောက်ရထားလိုင်းကို။ အရာရှိများကျောက်ခေတ်မက်ထရိုလိုင်း - များနှင့်MecidiyeköyMecidiyeköy - သူတို့ kaydett အဖြစ် Mahmutbey လိုင်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများ၏ပုံစံတင်ဒါလိမ့်မည်။ ပိုပြီးသတင်းအဘို့, နှိပျပါ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
Besiktas - ကျောက်ခေတ် Tekstilkent - Mahmutbey ရထားလိုင်းစီမံကိန်းခြေလှမ်း2မီထရိုလိုင်းအတွက်တင်ဒါပါလိမ့်မည် 03 / 12 / 2012 ရှယ်ယာနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်ဘယ်ဟာ "Besiktas - ကျောက်ခေတ် - Tekstilkent - Mahmutbey ရထားလိုင်းစီမံကိန်း" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နောက်ဆုံးအဆင့်က2နူးညံ့ဖို့စင်ပေါ်မှာကနေကြိုတင်အလုပ်သတ်မှတ်ချက်မြေအောက်ရထားလိုင်းကို။ အရာရှိများကျောက်ခေတ်မက်ထရိုလိုင်း - များနှင့်MecidiyeköyMecidiyeköy - သူတို့ kaydett အဖြစ် Mahmutbey လိုင်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများ၏ပုံစံတင်ဒါလိမ့်မည်။ နိုဝင်ဘာလထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အဆိုပါလေလံပွဲ - ဒီဇင်ဘာလ၌ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်း 2.1 ဘီလီယံအထိစီမံကိန်းအတွက်ကုန်ကျမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ နူးညံ့သော, အကြောင်းကို 25 ကီလိုမီတာရှည်လျားသောရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေး, လြှပျစစျ ...
နောက်ဆုံးအမှု၌တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအား 04 / 11 / 2011 မြန်နှုန်းအဆိုအရတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းလွတ်လပ်သော 250 km / h အကြားရရှိနိုင်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အားလုံးလျှပ်စစ်, အချက်ပြသစ်ကိုကို double-speed ကိုရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သည်။ ယနေ့တွင်တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ် 576 ကီလိုမီတာ, ရှိသမျှအချက်ပြမှုများနှင့်အာဏာအကြားလက်ရှိလိုင်းများ၏ပေါင်းလဒ်သည်။ ရရှိနိုင်ပင်လွတ်လပ်သော, 250 km / h built-မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုပြီးစီးပြီးနောက်မြန်နှုန်းသည်နှင့်အညီ, Dual-line ကို, ပါဝါနှင့် signal ကိုအတွက်ဖြစ်နှစ်ခုအဓိကမြို့ကြီးများ, 533 ကီလိုမီတာ '' အကြားအကွာအဝေး။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားသီးခြားကဏ္ဍများ 10 ပါဝင်ပါသည်။ •တူရကီ Sincan: 24 ကီလိုမီတာ•• Sincan တူရကီ-မြန်နှုန်းရထားဘူတာ-Esenkent: 15 ကီလိုမီတာ• Esenkent- Eskisehir: 206 ...
တူရကီ - Radar အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း 11 / 01 / 2012 မြန်နှုန်းအဆိုအရတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းလွတ်လပ်သော 250 km / h အကြားရရှိနိုင်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အားလုံးလျှပ်စစ်, အချက်ပြသစ်ကိုကို double-speed ကိုရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သည်။ ယနေ့တွင်တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ် 576 ကီလိုမီတာ, ရှိသမျှအချက်ပြမှုများနှင့်အာဏာအကြားလက်ရှိလိုင်းများ၏ပေါင်းလဒ်သည်။ ရရှိနိုင်ပင်လွတ်လပ်သော, 250 km / h built-မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုပြီးစီးပြီးနောက်မြန်နှုန်းသည်နှင့်အညီ, Dual-line ကို, ပါဝါနှင့် signal ကိုအတွက်ဖြစ်နှစ်ခုအဓိကမြို့ကြီးများ, 533 ကီလိုမီတာ '' အကြားအကွာအဝေး။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားသီးခြားကဏ္ဍများ 10 ပါဝင်ပါသည်။ •တူရကီ Sincan: 24 ကီလိုမီတာ•• Sincan တူရကီ-မြန်နှုန်းရထားဘူတာ-Esenkent: 15 ကီလိုမီတာ• Esenkent- Eskisehir: 206 ...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း Radar အတွက် Rize ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို (ဓာတ်ပုံပြခန်း) 28 / 05 / 2014 အဘယ်အရာကို Rize Ropeway Project ထဲတွင်လက်ရှိရာသီဥတု: Rize ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသည်Dağbaşıပြု expropriation စီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုဆက်လက်။ ဒါကြောင့်စုစုပေါင်း 480 mxnumx'lik လယ်ကိုသိမျးယူခဲ့ expropriation လေ့လာမှုများအတွင်းလူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူPaşakuရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌တည်၏။ ထို့ကြောင့်230 ဧက၏ expropriation ပွညျသူပွညျသားစုစုပေါင်းဧကသိမျးယူခံရဖို့ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ Rize မြို့တော်ဝန်ပါမောက္ခ Rize ခရီးသွားလုပ်ငန်း, သူစီမံကိန်းမှအဓိကပံ့ပိုးပေးမှုကိုအောင်ကပြောပါတယ် ဒေါက်တာ ယင်းအိမ်ရှင်နှင့်အလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့သွားလာ Rashad အသား, သူလိုအပ်သောအရောင်းအစေရန်ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။ သားသတ်သမားသူတို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်ချင်ဆိုသညျကား, "လောလောဆယ်, မြေယာဧကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 30 ဧကကျနော်တို့ရှိသည်သောဒေတာများအရသိရသည်သိမျးခဲ့သညျ။ ...
နောက်ဆုံးအမှု၌ TCDD Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) စီမံကိန်းကို 07 / 02 / 2012 တူရကီကနေ Sivas, တူရကီမှ Bursa ဖို့တူရကီကနေ Konya, တူရကီမှအစ္စတန်ဘူလ်မှပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ၏နောက်ဆုံးအမှု၌ TCDD Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) စီမံကိန်း ", အ Seljuk ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှစီမံကိန်းအားလာမယ့်တံခါးကို YHT သူအော်တိုမန်အင်ပါယာနှင့်တူရကီတစ်ဦးမြို့တော်နားလည်သဘောပေါက်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုလက်မှတ်ရေးထိုးအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) Project မှဝန်ကြီးများအတွက်ကျင်းပ, Bursa-Yenisehir အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုနှင့်အတူ Bilecik လိုင်း၏ Yildirim, Bursa-ပထမအဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးအခမ်းအနားအကျိုးရှိပါလိမ့်မည်, တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ၏ရထားလမ်းလွတ်လပ်ရေးရုန်းကန်များ၏လွတ်လပ်ရေးကဲ့သို့အရေးပါသည် ဤနေရာတွင်သင်ကစတင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တူရကီရထားဘူတာကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးYıldırım, သမ္မတနိုင်ငံ၏ကွှေးကျွောခွငျးပြီးနောက် Ataturk ရဲ့ရထားလမ်း ...
နောက်ဆုံးအမှု၌ Trabzon ropeway စီမံကိန်းကို 26 / 01 / 2016 Trabzon အတွက် Ropeway စီမံကိန်းကိုပြီးခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်: အရပ်ကွက်အတွင်းUzungöl'deစီးပွားရေးသမားအတွက် Trabzon အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Abdil Jalil ကိုယ်ပိုင်, Çaykara'da Sukru Fettahoğlu execute cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု shared ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်ပိုင်ခြင်း, ကြာရှည်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုပြောပါတယ်။ ယင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး "ယခင်ကအဆိုပါလေလံအတွက်အသွင်ပြောင်းတစ်ဆယ်၏တစ်နှစ်နှောင့်နှေးဘို့အကြောင်းကိုကြောင့်အဲဒီမှာခဲ့ပါတယ်, အခြားမိတ်ဖက်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဇုံအစီအစဉ်ပြီးနောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်အောင်တစ်နှစ်ကုန်လွန်ခံခဲ့ရသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့တွင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အနည်းငယ်အတားအဆီးထင်ရှား။ , တစ်စုံတစ်ဦးကမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်န်ကြီးဌာနရှိထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအမျိုးသားဥယျာဉ်မှတဆင့်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းကိစ္စများရှိပါသည်။ နုသတ်မှတ်ချက်များရေးနေ့က ...
Radar အတွက်Bandırma-Bursa-Osman-Ayazma မြန်ရထားစီမံကိန်း 16 / 09 / 2012 Bandırma-Bursa-Osman-Ayazma မြန်ရထားလိုင်းတူရကီ, Izmir, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Bursa မြို့ပြဒေသများအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်ခရီးသွားအချိန်လျှော့ချရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်။ စီမံကိန်းပြီးစီး၏အောအပေါ်တည်ဆဲ operating ပြဿနာများဖျက်သိမ်းရေးတူညီတဲ့စံအတွက်အာရှနှင့်ဥရောပအကြားတိုက်ရိုက် link ကိုပေးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချအဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, အဘို့ခွင့်ပြုပါရန်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း, ဒေသတွင်း၌လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယာဉ်အသွားအလာမတော်တဆမှု၏အခြားရည်ရွယ်ပစ်မှတ်။ Bandirma ၏နူးညံ့သော PROCESS Bursa နှင့်Bandırmaဆိပ်ကမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကို Bursa-Yenisehir မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းများတွင်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း-Ayazma မြန်ရထားစီမံကိန်းအဖှဲ့အစညျးအဖွစျရထားလမ်းကွန်ရက် Bursa-Osman နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် ...
Radar အတွက်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း 25 / 10 / 2012 မြန်နှုန်းအဆိုအရတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းလွတ်လပ်သော 250 km / h အကြားမရရှိနိုင်, မြန်ရထားစီမံကိန်း, လူသိများသည်ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောလျှပ်စစ်, အချက်ပြသစ်ကိုကို double-speed ကိုရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သည်။ ယနေ့တွင်တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ် 576 ကီလိုမီတာ, ရှိသမျှအချက်ပြမှုများနှင့်အာဏာအကြားလက်ရှိလိုင်းများ၏ပေါင်းလဒ်သည်။ ရရှိနိုင်ပင်လွတ်လပ်သော, 250 km / h built-မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုပြီးစီးပြီးနောက်မြန်နှုန်းသည်နှင့်အညီ, Dual-line ကို, ပါဝါနှင့် signal ကိုအတွက်ဖြစ်နှစ်ခုအဓိကမြို့ကြီးများ, 533 ကီလိုမီတာ '' အကြားအကွာအဝေး။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားသီးခြားကဏ္ဍများ 10 ပါဝင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာရင်းမြစ်ပေါ်တွင်သင်၏ကျယ်ပြန့်အသိပညာအဘို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2023
3 ။ လေဆိပ်မက်ထရို
Besiktas အစ္စတန်ဘူလ် BB - ကျောက်ခေတ် Tekstilkent - Mahmutbey ရထားလိုင်းစီမံကိန်းခြေလှမ်း2မီထရိုလိုင်းအတွက်တင်ဒါပါလိမ့်မည်
Besiktas - ကျောက်ခေတ် Tekstilkent - Mahmutbey ရထားလိုင်းစီမံကိန်းခြေလှမ်း2မီထရိုလိုင်းအတွက်တင်ဒါပါလိမ့်မည်
တူရကီ - Radar အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း Radar အတွက် Rize ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
နောက်ဆုံးအမှု၌ TCDD Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) စီမံကိန်းကို
နောက်ဆုံးအမှု၌ Trabzon ropeway စီမံကိန်းကို
Radar အတွက်Bandırma-Bursa-Osman-Ayazma မြန်ရထားစီမံကိန်း
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (265) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (619) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (518) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (665) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)